ISKUDAY KHUDRADDA: CAYAYAANKA WAAWEYN IYO CUDURRADA WAAWEYN - CHERRY
Cherry (Prunus tomentosa) waa geed geed dheer oo ku yaal bariga qorraxda kaas oo koraaya wax ka sarreeya seddex mitir dhererka. Sababtoo ah ubax hore ubax iyo miraha yar yar ee koray ee growers ee Russia, Ukraine iyo Belarus. Miraha of jeeriga qalqallan yihiin aad u yar yar jeeriga caadiga ah, laakiin ku dhowaad lahayn acid ma waxay ku guuleysteen jacayl caalami ah. Guutul daruuriga ah ayaa la cunaa cusub, la qaboojiyey xilliga qaboobaha, iyaga oo la karkariyey iyaga macaanka, saxaraha iyo waxtarka. Warshadu waa sahlan tahay daryeelka iyo beerashada iyo qabow u adkaysta.
Cudurada caamka ah ee johannesört qallafsan
Mararka qaarkood, u soo baxa beerta, waxaan aragnaa in isbeddel aan fiicnayn ay la socoto qamriga dareemey. Isagoo ka fikiraya sababta caleenta cherry ay u qalajinayso iyo miraha wax yar oo qallafsan ayaa hoos u dhacaya, waxaan go'aaminaynaa in geedka uu jiran yahay. Geedka jahannadu wuxuu ku xanuunsan karaa moniliasis, ciriiri iyo mararka qaarkood cocomycosis. Badanaa, calaamadaha dibadda ee cudurku aad buu u egyahay midba midka kale, laakiin si loo doorto daaweynta saxda ah, waxaad u baahan tahay inaad sameysid ogaanshaha saxda ah. Cayayaanka waxay degi karaan caleemaha geedka. Aan u fiirsanno si faahfaahsan ee cudurada ugu muhiimsan ee jeeriga dareemay iyo daaweyntooda. Wixii jawaab degdeg ah ee cudurrada beerta, xirmada gargaarka degdegga ah ee beerta waa in ay ku jiraan: Isku darka Bordeaux ama sulphate copper, lime biyo leh iyo barkada beerta, diyaarinta ku salaysan "Fundazole" iyo joogitaanka fungicides. Insecticides waa in had iyo jeer la joogaa gacanta.
Ma taqaanaa? Sidoo kale waa suurad wacan in la soo jiito shimbiraha si looga hortago cayayaanka beerta. Wixii shimbiraha waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto hal qol oo keli ah.
Moniliasis (gubasho monilial)
Kaliya cherry waa warshad aad u qarsoon, sidaa darteed cudurada waa dhif iyo adagtahay booqday. Geedka ugu yar ee u adkaysta cudurka, kaas oo loo yaqaan gubashada monilial
Calaamadaha ugu horreeya ee cudurka waxaa lagu arkaa kormeer muuqaal ah ee geedkan. Dildilaaca yaryar waxaa lagu arki karaa jilif, cirridku wuxuu bilaabmaa inuu ka soo baxo. Gumku waa walax adag oo dabiici ah, ama haddii kale alwaax dib u soo noqdaan. Cirridku waxay u muuqataa jilif ka mid ah geedka oo keliya markay dhaawacmayaan farsamooyinka cayayaanka. Ubaxyada iyo caleemaha jeeriga waxay jilicsan yihiin oo u noqdaan huruud, laanta gaaban ayaa si tartiib ah u bilaabaan inay qalalaan. Waa cherry monilioz. Dhab ahaantii, waxay aad u la mid tahay xaqiiqda ah in laamaha la xayiray dhaxan habeenkii dib loo soo celin karo ama ninkii beerta ka shaqaynayay oo la daweeyay kiimikooyinka oo si fudud u gubay geedka. Sababta musiibadu waa horumarinta miisaanka Monilia. Horumarkeedu waa mid deg deg ah, waxaa si deg deg ah u kobcaya ugana lakulmid laamo caafimaad leh oo leh xanuunka fungus. Oo hadda ka mid ah caleemaha dhalaalaya dhalaalaya waxay u muuqdaan dhibco boodh ah oo leh caleenta engegay. Haddii aadan bilaabin daaweyn, sida warshad ayaa loo jaraa dhimasho.
Waxaan bilaabi karnaa daaweynta johnta dareemayaasha ah ee moniliosis:
First of dhan, waxaan si taxadar leh u baaro cherry la xanuunsan ee jiran, raadi gubashada on jilif ah iyo jaray dhammaan laamihii leh raadadka cudurka. Sawirro laamiyey oo laqaatay ayaa la geeyaa meel ka baxsan goobta beerta oo la gubay.
Ka hor inta ubax, geed ayaa lagu buufiyaa xalkan: 10 g oo ah "Fundazol", "Topaz" ama "Topsina" ayaa lagu kala diraa 10 litir oo biyo ah.
Haddii guga uu yahay roobab iyo qoyan, buufinta waa in lagu celiyaa toddobaad gudaheed (meel u dhow dhammaadka ubax).
Si loo daaweeyo moniliosis, daaweynaha xiga ee bukaanka bukaanka u baahan yahay in la fuliyo dayrta iyo guga soo socda xalka leh:
Dhaqanka dhoobada dayrta:
Warshadda waxaa lagu buufiyaa 3% Bordeaux isku dar ama 3% xal copper sulfate.
Badeecada xilliga guga waxaa lagu fuliyaa laanta la dhashay, ka hor inta aan la bararin:
Isku daadin diyaarin isku mid ah, laakiin xalalkooda 1% ayaa la qaadaa.
Ma taqaanaa? Monilioz la jaray jeeriga - cudurku waa mid aad u xun, iyo haddii aad ka baxdo warshad leh iyada oo aan la gelin iyo daaweyn, waxay si lama filaan ah u dhiman doonaan.
Klesterosporiozom badanaa waxa ay ku dhacdaa geedo geedo dhagax ah iyo geedo. Roob, geedo ciirsi ah iyo khudaar cagaaran ayaa si sahlan loo saameeyaa, laakiin dhaqamada ugu xasilloon waa cherry iyo dareemaan cherry. Magaca labaad ee cudurkani waa ciriiri. Carpophilum fungus fungus fungus carpophilum waa wakiilka keena ee nodules. Gaabis, qulqulo qoryo iyo diirran, cimilada qoyan waa saldhig heer sare ah oo loogu talagalay xayawaanka musqusha. Beeralayda fungus ma lumiso miro-dhalaalkooda xilliga jiilaalka.
Isla marka heerkulka guga kor u kaco + 4 ° C iyo boodhka barafka iyo dhibcaha ayaa bilaabmaa - xayawaanka fangasku wuxuu noqdaa mid firfircoon oo qaabeynaya balaarinta mycelium qaab barkimo buni ah oo leh lakabka cudurka qaba iyo burooyinkeeda barara. Cayayaanka iyo dabayshuna waxay faafiyaan xayawaanka waxayna ku faafiyaan dhirta caafimaad leh. Jeexjeexinta beerta waxay dhacdaa toddobaad gudaheed, tan klyasterosporiosis waxay leedahay mudo gaaban mudo gaaban - illaa afar maalmood. Xilliga xagaaga waxaa jira horumarinta 3-4 jiil ee fungus. Calaamadaha ugu horreeya ee cudurka ayaa u muuqda sidii dhibco caleemo bunni ah ama midab casaan leh oo ku yaal caleemaha dareemayaasha. Toddobaadka dhexdiisa, nudaha ku yaal bartamaha goobta ay dhibaatadu saameysey ayaa baxaysa oo hurdo ku filan, iyo caleemo yaryar (ilaa 2 mm) iyada oo loo marayo godadka ku jira caleemaha. Dhinaca geesaha godka, cidhifyada nudaha xaashida madow, xuduudda madow waa la helaa. Tani waa feejignaan ah phytosteriasis cuduro kale oo fangas ah.
Dildilaaca wuxuu ka muuqanayaa koontada dhirta uu ku dhacay caleenta cholosomosis, kaas oo ka soo baxa caleenta (maaddo dabiici ah oo la mid ah cirridka). Burooyinkeeda xayawaanku waxay saameeyeen mycelium madow oo u dhintaan, midabkuna wuxuu soo daadiyaa oo ka baxaa. Dharbaaxada Cherry, ayaa ka dambeeya koritaanka, waa wax caleen ah iyo caleemaha hore ee caleemo xilliga dayrta, oo ka duwan dhirta caafimaad leh.
Kahortagga iyo daaweynta kolestaroolka:
Waxaan dooranaynaa beeritaanka noocyo u adkaysta phytosteriasis.
Waqtiga aan ka jarno caleemaha xididka. Markaad ka fogaato adkeyn, waxan ka hortagnaa cudurrada fangas.
Warshadu waxay noqon doontaa mid xoog leh oo caafimaad leh haddii la bacrimiyo oo la waraabiyo waqtiga.
Ka dib markii la gooyaa laamihii waxaan wax ka qabannaa waxyeelo farsameed oo leh beerta beerta.
Xilliga dayrta waxaan ka saari karnaa caleemo dhicid iyo cufnaan - cayayaanka iyo fangaska fungal ayaa hibernate iyaga.
Spring waxay sameeyaan saddex daweyn beerta:
Daadinta isku dar ah Bordeaux (on laamaha qaawan).
Qaliin yar oo dabacsan, daweyn Kuproksat.
Ka dib markii daaweynta labaad mar kale "Kuproksat" 14 maalmood kadib.
Waa muhiim! Daaweynta kiimikada ee ugu dambeysa waxaa la sameeyaa ugu dambeyn 21 cisho kahor intaadan soo qaadin berry.
Cudurku wuxuu ka yimid qarnigii la soo dhaafay ee ka yimid wadamada Scandinavian wuxuuna ku dhuftey geedo cherry ah. Cudurku waa fungal, ku faraxsan yahay fungus-dulin, nool iyo taranta ee caleemaha cherry. Caleemaha geedka cudurka qaba waxay noqdaan huruud, waxay ku daboolaan dhibco mugdi ah oo horey u dhacaan geedka. In la dagaallamo cocomycosis, daaweyn fungicidal ah oo xakameynaya horumarinta xayawaanka fungal iyo ugu danbeyntii u baabbi'iyo caawimaad.
Geedka johannesört ayaa ku dhawaadan aaney saameyn ku yeelaneynin cocomycosis, laakiin haddii ay tani dhacdo, waxaan ku daaweynaa geedkan iyada oo lagu buufinayo fungicides. Daryeelka beerta, goynta gaaban ee laamaha geedka la dareemay iyo daaweynta fungicides iyo "Fundazole" ee looga hortago cudurrada - tani waa saldhigga caafimaadka ee orchard cherry.
Cudurka cherry ee beeray, oo ay sababtay dhirta Taphrina fungus, waxay u egtahay ugxan-dhadhan qotoda ah on a cherry ah. Warshad caleenta ah ayaa midabyo foorno la'aan ah oo aan lahayn lafo iyo qaab bakhtiic ah. Kuwani "jeebka" waa boogaha ay u dabacsanaanayaan xayawaanka musqusha. Xitaa ka dib markaad qalajiso, berito waa mid ka mid ah caabuqa. Waxaa lagama maarmaan ah in laga soo saaro geedka iyo gubi berry saameeya, iyo daweeyo dhirta buka qaba fungicides nidaamka.
Sida loo xaliyo cayayaanka ugu muhiimsan ee cherry
Qoysaska miisku waa nasiib darada ugu weyn ee jiiraanka dareemey. Waxay jeexan yihiin jilif on baadiyaha ah jiilaalka. Qoyaanka ka hooseeya barafka ayaa u soo baxaya inay waxyeello u geystaan, sida cirifka jilicsan ee beertiisa iyo tunnelada geedka sidoo kale hoos cover barafka.
Hababka xakamaynta jiirka
Xilliga deyrta, dogobaadka geedaha waxaa lagu daboolay mesh bir-ganaax, maadooyin sun ah ayaa la dhigay meel u dhow john. Xilliga jiilaalka, barafka, oo ku yaal agagaarka goobaha pristvolny, ayaa si qarsoodi ah u cidhiidhinaya raadiyaha mitir. Dhamaadka jiilaalka, barafka waxaa si buuxda looga nadiifiyaa jirridda duurka.
Aboor ku beeray
Cayayaanka xasharaadku waxay ku dhacaan maaha xayawaanka oo keliya, laakiin sidoo kale midhaha kale, ee aan la dhaafin dareenkooda midhaha miraha la dareemay. Cayayaanka cayayaanka ayaa ku quudinaya saxarka miro, caarada caaradu waxay ku sii jirtaa midhaha gnawed, miraha khafiifka ah ma koraan, berry cherry si tartiib ah u joojiyaan sii kordhaya oo qalalan. Inta lagu jiro xilliga diiran ee beerta ku kori kartaa dhowr dhalinyaro ah Baalallayaasha tubta. Dagaalka ka dhanka ah cayayaanku waa inuu billaabmaa sida ugu dhakhsaha badan ee ballaadhanka aboorka ku bilaabo.
Waxaad ku dabooshaa godadka dabaysha si loo yareeyo. Beerta dhexdeeda, taangiyada leh maaddooyinka macmacaanka ah, kuwaas oo xabagta lagu daro, la dhigo oo lagu dhegeysto geedaha. Dufanka ayaa u duulaya urka waxayna u dhintaan koolada. Boogaha ayaa la nadiifiyaa maalin kasta cayayaanka dhintay waxayna ku shubaan iyaga oo ku daraya. Sidaas awgeed waxaan ka ilaalin doonaa cherry dareemeen ka soo dirxiga ee dirxiga aboorka.
Habka kiimikada (laba daweyn ayaa la sameeyaa)
Daaweynta ugu horeysa ee isla markiiba ka dib ubax, marka ugxan-miro ee bilaabmaa inuu buuxiyo, diyaarinta "Decis" ama "Alatar". Waxaan burburinaynaa jiilkii koowaad ee aboorka.
Mashiinka labaad ayaa lagu fuliyaa tobanka sanno ee saddexaad ee bisha Luulyo. Ku daawee daawooyinka "Karbofos" ama "Kinmiks." Moobeytani waxaan nadiifinaynaa beerta jiilka labaad ee aboorka.
Intee jeer ayey tahay in qofku u arko beerta sida badeecada ee caleemaha geedaha cherry ee la dareemay la yareeyey cayayaanka yar yar ee madow. Waxay u muuqatay in la cuno cherry. Aphid wuxuu nuugayaa soodhaha geedka, isaga oo daciifinaya una furaya jadwalka cudurada kala duwan.
Waxaad la dagaalami kartaa aphids hababka dadweynaha:
Daadi duurka ku yaal maqaarka la qabsaday oo leh xal ash. Si aad u diyaariso xalka, weelka hal-litir ee qoryaha qoryaha waxaa lagu shubaa 5 litir oo biyo ah oo lagu mudo 24 saacadood.
Hagaag waxay ka caawisaa daaweynta caleemaha saameeya qashinka. Qalabka saabuunta dharka lagu maydho waxaa lagu rusheeyaa huurka iyo ku shub biyo diirran mugga 10 litir. Marka ay saabuuntu gebi ahaanba kala dirto biyaha, waxaad bilaabi kartaa ka shaqeynta.
Aphids on dhirta miraha waxaa lagu beeray ay "adhijirrada" - quraanjada. Si looga hortago in ay ku faafaan aphids on geedaha iyo ku xoortay geedihii, dabinka ku xiran yihiin dogob ee dhirta, la leexiyo leh finan. Qudhaantu way xirxiraan mana dhaafi karaan caqabadan. Geedka ayaa weli ah mid aan ku noolayn aphids.
Aphids ma jecla in ay ku buufiyaan infusions caleemaha tubaakada, yaryar, baradho iyo daboolka yaanyo. Faleebo leh mid ka mid ah dhirta kuwan waxaa loo diyaariyey sida soo socota: baaldi nus oo ah khudradda cufan ee la jajabiyey ayaa la buuxshay waxaana lagu shubay kore biyo karkaraya. Dabool oo ku adkeyso laba maalmood. Faleerka ayaa diyaar u ah inuu isticmaalo.
Haddii daaweynta nafleyda aysan caawinin, waxaan u jeednaa ilaalinta kiimikada.
Waxaad isticmaali kartaa cayayaanka "Iskra" ama "Taliye". Diyaargarow waxay burburiyaan aphids iyo siisay iyo ilaalin dhirta la daweeyay illaa dhammaadka xagaaga.
Boorka (Jeebabka) Mite
Cayayaanka jeebka, dejinta on jeeriga dareemay, quudiyo on dheecaan caleemaha yar yar, taas oo gacan ka geysata daciifinta iyo dhimashada geedka mustaqbalka. Haddii, marka la eego jiirarka dareemay, waxaa jira caleemo leh "burooyinka", taas macnaheedu waa in baadiyaha ay ku dhacdo shil.
Aad waxtar u leh dagaalka ka dhanka ah caarada daaweynta biyaha karkaraya leh baadiyaha. Daaweynta noocan oo kale ah ayaa lagu sameeyaa horraanta gu'ga, xitaa ka hor inta aan la jebin, oo laga shaqeynayo laamood qashinka ah ayaa suurtagal ah. Biyaha kulul (ku dhawaad ​​biyaha karkaraya) waxay ku shubaan biyo waraab ah oo leh qulqulaya waraaqaha iyo waraabinta duurka dhuxusha (oo laamaha laamo).
Saddex maalmood ka dib waxaad ku celin kartaa waxqabadka. Tani inta badan waa ku filan tahay. Marka dhirta ay baxdo, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daaweeyo sunta cayayaanka ("Aktara" ama "Karate"). Xilliga dayrta, qashin caleen ah ayaa si taxadar leh loo soo uruuriyaa geed, iyo bisha Oktoobar waxaad u baahan tahay inaad qodo ciidda xuddunta u dhow ee geedka. Dhammaan tallaabooyinkani ma siin doonaan fursado ciriiri ah jiilaalka.
Gawaarida caleemaha cagaaran ayaa ku nool kuna quudiya duurka iyo geedaha. Gawaarida dhaadheer illaa 2 cm oo cabbir, oo leh midab cagaaran ama midab madow. Guga, waxay qaniinaan gudaha gudaha burooyinkeeda ama burooyinkeeda geedka, xagaaga waxay ku quudiyaan caleemaha iyo miraha. Xoollada caleenta leh ayaa si sahlan loo aqoonsan karaa caleemo isku laaban.
Si loola dagaallamo caleen, kormeer si taxaddar leh u dhirta dhirta waa lagama maarmaan, burburinta laamaha kufsi leh ukumo-saarista, caleemaha leh dirxiga ku xoqay tuubo ayaa la jebiyey oo gubay.
Marka heerkulka guga la aasaaso kore +4 ° S, daaweeyo dhirta leh daroogada "Daaweynta" Xalka waxaa la sameeyaa heerka: 0,5 l ee daroogada halkii 10 l oo biyo ah. Qaddarkani waa ku filan yahay in la hirgeliyo saddex ama afar duurka oo ah jiirarka dareemay.
Haddii aad dib u dhacdo daaweynta guga iyo xayawaankuba waxay hore u degeen caleemaha iyo burooyinkeeda dhirta, ka dibna waxa fiican in la isticmaalo daweynta pyrethroids. Daawooyinka suuban sida "Ivanhoe", "AltAlf", "Accord", "Alfatsin", "Alfashans", "Tsi-Alpha", "Fatrin", "Fastak". Xalka shaqeynta diyaargarasyadan waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu saleynayo xisaabinta: 10 ml oo biyo ah 3 ml ee diyaarinta, ku dabakhi heerkulka hawada oon ka badnayn +25 ° C In kulaylka daawooyinka ma aha mid wax ku ool ah.
Isku darka caleemaha geedaha ee Insegar, koritaanka cayayaanka iyo korriinaha horumarinta, waxay keenaysaa natiijo wanaagsan. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in la sameeyo daaweynta ka hor xagaaga weyn ee aboorka balastaba si ay ukunta-laying waxaa loo habeeyay caleemo la daweeyay.
Waa muhiim! Isticmaalka diyaargarawyada ay ku jiraan pyrethroids waxay sababi kartaa dhalmo aan la xakameynin oo ah shimbiraha beerta.
Sida loo ilaaliyo jeeriga la dareemay ee ka soo cayayaanka iyo cudurrada: tallaabooyin ka hortag ah
Si loo soo koobo dhammaan waxyaabaha kor ku xusan, waxqabadyada soo socda ayaa loo baahan yahay si ay u koraan beerta caafimaad leh:
Daaweynta ka hortagga dhirta leh alaabta xakamaynta cayayaanka.
Daaweynta jeeriga la dareemay cudurada iyo cayayaanka ee daaweynta kiimikada iyo bayoolojiga.
Gubashada dayrta ee laamaha iyo nadiifinta taxadar leh beerta laga soo baxo caleenta iyo miraha dhicisoobay.
Digidda goobooyinka pristvolnyh ee jiilaalka, kaas oo dila cayayaanka jiilaalka ee ciidda.
Haddii aad raacdo sharciyadan fudud ee diyaarka ah ee jeeriga la dareemay, beertaadu waxay noqon doontaa mid caafimaad leh, iyo beergooyska macaan ee macaan leh, waxay kugu farxi doonaan sanad walba.